बिप्लबलाई अ’परा’धी भन्ने रमेश प्रसाईहरु लाई सुझाब, बिप्लब लाई बुझ्न आखा खोल्नुहोस
शारिरिक रुपले अशक्त भएर पनि अरु बिरुद्ध जथाभावी आगो ओकल्ने जथाभावी मनगढन्ते हावा कुरा गरेर अरुको चरित्र हत्या गरेर समाज लाई ऊत्तेजित पार्ने
स्वभावको रमेश प्रसाई को पछिल्लो भनाई लाई लिएर आपत्ती जनाऊदछौ, ऊनले शुरुमा ऊनले महासिचब कमरेड बिप्लब लाई कम्युनिष्ट होईन भनेको छ, यसको अर्थ प्रष्ट छ ऊनले बिप्लबलाई खुल्ला
आखाले देख्न सकेका छैनन! बिप्लब लाई बुझ्न आखा मात्र भएर हुदैन दिमाग पनि चाहिन्छ! भ्रष्ट सामान्ती सोच भएको मगजले अरुको बास्बिकता बुझ्न सक्दैन! करोड
को पजेरो भित्र बसेर एनजीओ आईएनजिओ एनसेलको भत्ता खाएर, अपागं भत्ताको नामको राज्यको चारो खाएर सुख सयलमा खट्पटिएको थोत्रो मान्छेले बिप्लब लाई बुझ्न धेरै कठिन हुनसक्छ!
लेलिनका बिरोधीहरु पनि लेलिन लाई कम्युनिष्ट होईनन भन्थे, कार्ल माकर्सलाई झन जर्मनी फ्रान्सेली पुजीपतीहरुले सामन्त भन्दथे, माओ लाई भन्दथे, युद्धका
बेला झन प्रचण्ड भन्ने ब्यक्ति नै छैन भन्ने समाज मा हुर्किएका प्रसाई जस्ता पात्रहरु लाई बिप्लब कम्युनिष्ट हुन भनेर बुझाऊन जरुरी छैन! संसदिय दलाल ब्यबस्था अन्त्य गर्दै देशमा बिज्ञानिक समाजबाद स्थापना
गर्नुपर्ने माग राख्दा तिनीहरुकै दलाल सत्ताले प्रतिबन्ध लाएको पार्टी र नेतृत्व लाई कम्युनिष्ट होईनन भन्नु हास्यास्पद त छदै छ! सामान्तहरु ले गैर कम्युनिस्टहरुले
पुजिपती दलालहरुको नोकरशाहहरुले सच्चा कम्युनिष्ट र ढोंगी कम्युनिष्ट लाई हेर्ने दृष्टीकोण फरक हुन्छ! रमेश प्रसाई जस्ता पूँजीपति दलाल नोकरशाहीहरुले महासचिव कमरेड लाई कम्युनिष्ट नदेख्नु स्वभाविकै हो!
जुन मान्छे जन्मे देखी जिबनको मध्यम पिरियड सम्म देशको आमुल परिबर्तन को लागि सारा जिबन क्रान्तीमा सुम्पिएको छ! सारा धन सम्पत्ती पार्टी लाई बुझाएर
जनयुद्ध मा लगानी गर्यो, जसको आफ्नो भन्नु एऊटा स्थायी आवास छैन जसको कुनै स्थायी भुमी छैन जसको मुटुमा आफ्नो भन्नु मात्र देश र सर्बाहारा जनता छ त्यस्तो महान देशभक्त संघर्षशिल क्रान्तिकारी
अथक र अदम्य हस्तीलाई कम्युनिष्ट नदेख्ने रमेश प्रसाई जष्ता सामन्तका गुलामहरु बास्तबिक अशक्त हुन स्वत स्वास्थ्य र मानशिक रुपले कमजोर भएर बाचिरहेको एक निर्जिब प्राणी हो भनेर बुझ्न जरुरी छ!
दोश्रो कुरा, रमेश ले कमरेड बिप्लब लाई सामन्त भनेका रहेछन! जो निर्जिब ब्यक्ति लाखौको गाडी मा सररर चढेर ठुला गफ दिएर हिडिरहेको छ! जसको वरीपरी डलर नै
डलरको रजाई छ! जसको लवाई खवाई हेर ऊच्च सामन्तको सन्तान जस्तो छ! जसको श्रोत सम्पत्ति खोज्ने हो भने बिनोद चौधरी, ज्ञानेन्द्र शाह लाई पनी मात खुवाऊन सक्छ! त्यस्तो
नबधनायड्य कुलिन पुजिपती सामन्तले आफ्नो खाईपाई आएको गास गुम्ने भयो, आफ्नो कुलिन साम्राज्य खरानी बन्ने डर त्रासले अरुलाई तथानाम गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति
दिएर हिडिरहेको छ! आफु सामन्त छ अरुलाई तथानाम सामन्त भन्दै हिड्नु अझै हास्यास्पद छ! यो त जो चोर ऊसकै ठुलो भयो, आफु बडेमान सामन्त छ अरुलाई सामन्त भन्दै डकारिरहेको
छ! यो प्रसाईंहरुको पराजय को पिडा हो! यो एनसेल जोगाऊन ऊसकै भत्ता खाएर बिप्लब माथी प्रहार गर्ने खुफियातंत्र हो! फेरी पनी भनौ, कमरेड बिप्लब लाई राज्य लुछिरहेका गोकुल बास्कोटा, केपी ओली, बिश्णु पौडेल, प्रचण्ड, शेरबहादुरहरु सॅग नजाच्दा हुन्छ!
तेश्रो कुरा, डा प्रकाश को बारेमा पनि अनावश्यक बोलेको रहेछ, मिस्टर रमेश बुझ्न जरुरी छ, माओ ले स्नातक पढेका थिए, लेलिनले पनि कानुन मा स्नातक पढेका थिए,
कार्ल मार्क्स देखी एंगेल्सको ईतिहास हेर ऊच्च शिक्षा हासिल गरेरै क्रान्तीमा ऊच्च प्रेरणादायी भुमिका थिए! जनयुद्धमा होमिएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको स्तर पनि कम्ती को थिएन, ऐ
मिस्टर रमेश जि के गरिबले ऊच्च शिक्षा पढ्दैमा, के गरिबले डाक्टर पाईलट ईन्जीनिएरीङ्ग वकिल पढ्दैमा ऊ सामन्त हुन्छ??के ऊ कम्युनिष्ट हुन सक्दैन ?? अर्को कुरा
एकिकृत जनक्रान्ति मा डा प्रकाश चन्द जस्ता युबाहरुको ठुलो भुमिका रहन्छ, ऊहालाई एक हस्पिटल भित्र गौण रहन मात्र पढाईएको होईन, ऊहालाई देश का हरेक नागरिकको जिम्मेवारी बोकाऊन
पढाईएको हो, ऊहाको काम सरकारी जागिर खाने दुई चार करोड कमाऊने हुदै होईन ऊहाले तिन करोड गरिब नेपालीको ऊपचार गर्ने फराकिलो ऊच्च महान जिम्मेवारी
बोकेको देशको एक ऊच्च डाक्टर हो यसरी पनि बुझौ, अनि डाक्टर पढ्दैमा बम नै पड्काऊनु पर्छ भन्ने कहा छ?? अस्पतालको गेट बाट ह्वाईट एर्पोर्न लगाएर शान्तिपुर्ण आन्दोलन को अगुवा गर्नु पनि बम पड्काऊनु भन्दा ठुलो कदम हो!
आखा नदेख्ने प्रसाई जि ले बुझ्नु पर्छ, क्युबाका महान नेता चे ग्वेभारा पनि पेशाले डाक्टर थिए, ऊनले आवश्यक पर्दा आफ्नो पेशालाई छोडेर क्रान्तीमा होमिए, जसले
दक्षिण अमेरिका लाई थरथरी हल्लाईदिए, क्येबेली क्रान्ती का ऊत्सर्जक चे ले पछि ऊधोगमंत्री हुदा एक रुपिया पनि तलब नलिएर बिश्वभरीकै पैषाका लागि मरिहत्ते गर्ने पुजीपतीहरु को
मगज नै हल्लाईदिएका थिए! ऊहाले देखाए असली कम्युनिष्ट कस्ता हुन्छन भनेर! भनेपछि यताका डाक्टर प्रकाश चन्द पनि चे ग्वेभारा किन बन्न सक्दैनन! ऊनले
पनि आवश्यक पर्दा घोषित एकिकृत जनक्रान्ति मा सहभागी बन्न जुनसुकै बेला तयार छन! क्रान्तीमा सबैले फरक फरक जिम्मेवारी लिने हो, भोलीको नेत्र बिक्रम चन्द भनेको प्रकाश नै हो! आवश्यक
परेमा प्रकाशले पनि बन्दुक बम बोक्न सक्छन यो कुरा प्रसाई, ज्ञानेन्द्र शाही जस्ता सामन्तका रक्षक कबचहरु बकबकाउनु पर्दैन! त्यसकारण प्रकाश ले डाक्टर पढ्दैमा
कसरी सामन्त भो ? ठुला ठुला दुख कष्ट यातना भोगेर आएको प्रकाश लाई सामन्त देख्ने निज प्रसाई को दिमाग पनि अन्धो हुनुपर्छ यस्ता घटिया आरोप लाऊनु अघि दश चोटी सोच्नु पर्थ्यो!
चोथौ कुरा, बम को कुरा छ! एकातिर कम्युनिजम लाई बिश्वास गर्छु भन्ने अर्कोतिर बम को बिरोध गर्ने प्रसाई को यो कुरा पनि हास्यस्पद छ! शान्तिपुर्ण तवरले माग राख्दा
सुनिदैन भने बम पड्काऊनु पनि एऊटा योग्यता हो! जसलाई नाप्ने कुनै कसी छैन । जसको जे क्षमता छ त्यही गर्ने हो । बच्चाको खेल्ने क्षमता छ । खेल्छ, खान्छ । बुढाबुढी काम गर्न
सक्दैनन्, गफ गर्छन, सराप्छन्, खान्छन् । हो त्यस्तै बम पड्काऊन सक्छ ऊसले पड्काऊने हो! बम अपराधीले नि पड्काऊछ बम राज्यले नि पड्काऊछ र बम क्रान्तीकारीले
नि पड्काऊछन् बम पड्काऊदा कसको बढि क्षति भयो त्यहा हेर्न जरुरी छ! बम पड्काऊदा गोकुल बास्कोटा को घर गयो, एनसेल ढल्यो त्यो समाज र जनता का लागि अपरिहार्य थियो!
समयले बम खोज्यो पड्काईयो त्यो कम्युनिष्ट सिद्धान्त भित्रै पर्छन! रोगीले औषधि पाउनुपर्छ त्यो अस्पतालको सिद्धान्त भित्र पर्छ। हो दबिएका बेलुन पड्किए डै,
तन्किएका रबर फुत्किएझै, क्रान्तिकारी शक्तिका आवज लाई नजरअन्दाज गरिन्छ, क्रान्तिकारीका बिचार लाई नजरबन्द गरिन्छ, अझै भनौ क्रान्तिकारीहरु लाई बन्दुक को नालले दबाईन्छ भने बम र
बन्दुक द्रधारा नै प्रतिरोध गर्ने कम्युनजम भित्रको यो एउटा आधारभूत सर्त हो । मार्क्स लेलिन माओ ले उठाएका कुरा पनि यही हुन् । यसको प्रयोग क्रान्तिकारीसरुले समय
काल परिस्थिती हेरर प्रयोग गरिन्छन र गरिरहनेछन! बर्ग संघर्ष, बम बन्दुक, राज्य बिरुद्ध हुने कैयन प्रतिरोधहरु र त्यसबाट हुने पणनीति परिस्थिती बारे कमरेड मार्क्सले पनि त्यसलाई
व्यवस्थित रुपले प्रस्तुत गरेका छन! आखा छन भने कम्युनिष्ट को बिभिन्न दस्ताबेज पढ्न प्रसाई लाई आग्रह छ! युद्ध र क्रान्तिमा सबै जायज हुन्छन, मान्छेका मृत्युहरु
अनिबार्य हुन्छन, क्रान्तिकारीको मृत्यु बलिदान मा पणिनत हुन्छन भने बर्ग दुश्मनका मृत्युलाई क्रान्तिकारी को जितको रुपमा लिनुपर्छ! ति बम बन्दुक कलम सबै खजनाहरु प्रयोग र दुरप्रयोग
बर्गसंघर्ष भित्र जायज हुने गर्दछन भनेर सबैले बुझौ! आफुलाई कम्युनिष्ट भन्न रुचाऊने रमेश प्रसाई ले बुझ्नु पर्छ साम्यवादी संस्कृतिमा चारवटा कुरा ख्याल राख्नुपर्छ । गर्न
नहुने काम पनि गर्ने, गर्न हुने काम पनि गर्ने, अलिअलि गर्न हुने गर्ने, अलिअलि गर्न नहुने गर्ने, अलिअलि गर्न हुने र नहुनेबाट पार भएर काम गर्ने । यी चारवटा संस्कृतिमा कम्युनिस्टहरु भुल्छन्त
र बिप्लब नेतृत्वको नेकपाले कदापी भुल्दैन! ठाउँ र अवस्था हेरिकन काम गर्नुपर्छ! एकिकृत जनक्रान्ति मा कसैलाई बम बोक्नैपर्छ भनेर बिप्लबले कसैलाई ऊर्दि
जारि गरेका छैनन र बोक्नुहुदैन पनि भनेका छैनन! प्रकाश चन्दले म डाक्टर पेशा छोडेर बम बोक्छु भनेर आग्रह गरेमा ऊनलाई बम बोक्न बाट पार्टीले रोक्दैन! अन्य नेता कार्यकर्ता र जनताका सन्तानले पनि
म डाक्टर, ईन्जिनियर पाईलट पढ्छु बम बोक्दिन भन्छन भने आ आफ्नो ईच्छा हो! युद्ध मा जानैपर्छ बम पड्काऊनै पर्छ भनेर नत बिप्लबले भनेका छन नत पार्टीले
भन्दछ्! बम बन्दुक बोक्न जसले चाहाने हो ऊसले गर्ने हो, प्रसाई, ज्ञानेन्द्र शाही रबि जस्ता सामन्तका रक्षकहरुले बुझ्नुपर्छ सामान्ती राज्यसत्ताका अखडा मा बम बिस्पोट गराऊन, बन्दुक बोक्न
हिजोको महान जनयुद्ध मा पनि युबाहरुमा तछाड मछाड हुन्थ्यो आजको एकिकृत जनक्रान्ति मा हुनेछन! भोली आवश्यक परेमा रमेश प्रसाई, ज्ञानेन्द्र शाही जस्ता
खलपात्रहरुको टाऊका मा पनि बम पड्काउनु पर्ने स्थिती आऊनसक्छन! त्यो समय ले निर्धारण गर्छन, युद्ध हिंसात्मक हुने भएकाले त्यहा भुलबस भौतिक मानबिय र जनधनका क्षतिहरु हुने बिषयलाई
अतिरन्जित गरिनुहुदैन! जिल्ला सदरमुकाम कब्जा गर्न जादा सेना प्रहरी लाई मार्ने ऊद्क्षेक्ष्य लक्ष्य क्रान्तिकारीले बोकेका हुदैनन, सेना प्रहरीलाई आत्मसमर्पण गर्न समय
दिईन्छन यदि दिएनन बिपरित बन्दुक पड्काऊछन प्रतिकार गर्न आऊछन भने लडाई शुरु हुन्छन! एनसेल लाई कर तिर भनेर पटक पटक पार्टीले शान्तिपुर्ण दबाब दिएकै हो अटेर गरेपछि धक्का खायो!
यसरि बुझ्दा सहज हुन्छ! क्रान्तिमा होमिसकेको पार्टी मा भौतिक र मानबिय क्षति जोड्नु हुदैन! बलीदान ले मात्र परिबर्तन सम्भव छ भन्ने माओका सिद्धान्त ताजै छन! पेरु,
फान्स्र, जर्मनी बिद्रोह, गान्धी देखी मन्डेलाका क्रान्ती, लिंकन देखी लेलिनका क्रान्ति, माओ देखी चे सम्म प्रचण्ड देखी ६२\_६३ का जनआन्दोलन सम्म के मान्छे का बलिदान भएका थिएनन र ?? मान्छे नमर्ने युद्ध क्रान्ती कहा भएको छ मिस्टर प्रसाई??
के बिगतका कैयन क्रान्तिमा एक जना पनि शहिद भएका थिएनन र एकिकृत जनक्रान्ति शान्तिपुर्ण छदा छदै हाम्रा एक दर्जन बिर कमरेडहरु शहादत भए हजारौ लाई
नजरबन्द गरिएको छ, सयौ घाईते छन, जनयुद्धका शहिद परिवार योद्वाहरुको हालत ऊस्तै छ! बैज्ञानिक समाजबाद स्थापना को माग गर्दा राज्यले बिप्लब र पार्टी माथी गरिएको ज्यादति के
साच्चै हिंसात्मक छैन ?? अनि राज्यले छ महिने सुत्केरी देखी ८० बर्षको बृद्ध समेत लाई यातना दिदा हिंसा भएन अनि हिंसात्मक राज्य का हर्कत बिरुद्ध प्रतीकार गर्दा
प्रतिरोध गर्दा हिंसा देख्ने अपराध देख्ने रमेश प्रसाई, रबि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र शाही जस्ता सामन्तका रक्षकहरु तत्काल समयमै सच्चिन आग्रह
गर्छौ! अन्यथा एऊटा पुजिपती दलाल नोकरशाही सामन्ती भ्रष्ट राज्यसत्ता सॅग लडिरहेको एक क्रान्तीकारी शक्ति सॅग
मुकिबिला गर्न आऊने झिनामसिने सुलसुले अन्धा किरा को स्थिति कहा बाट कहा पुग्ने हो ??? हामिले यो खबर सामाजिक संजाल फेसबुक मा भेटेका हौ ।